हाइलाइट्स नेपालले दर्शकको गुनासो सुनेको कि, कतै मार हान्न खोज्नु भएको दीपक जी ? « Intro Nepal
हाइलाइट्स नेपालले दर्शकको गुनासो सुनेको कि, कतै मार हान्न खोज्नु भएको दीपक जी ?
Published On : २९ भाद्र २०७६, आईतवार १७:०६
दीपकराज राज गिरीलाई फेसबुकमा दर्शकले धेरै जसो सोध्ने प्रश्न हो छक्का पञ्जा यूट्यूबमा कहिले आउँछ ? उनले त्यसको घुमाउरो जवाफ दिँदै आएका थिए । अहिले आएर उनले कन्फर्म गरेका छन् कि छक्का पञ्जा २ दशैँको अवसर पारेर यूट्यूबमा रिलिज गरिँदै छ । उनले स्टाटस पोस्ट गर्दै यो कुराको जानकारी गराएका छन् । उनले स्टाटसमा भनेका छन्, ‘अन्तत हाइलाइट्स नेपालले दर्शकहरूको धेरै गुनासो सुनेको छ । अब दशैंमा घर बसेर छक्का पन्जा (दोस्रो) हेर्न सक्नु हुनेछ । ढिला हुन गएकोमा म माफि माग्दछू ।’
उनको यो स्टाटसले छाक्का पञ्जाको यूट्यूब रिलिजको पर्खाइमा बसेका दर्शकहरुलाई खुसि मिलेको छ । तर, छक्का पञ्जाको यूट्यूब रिलिज दशैँमा हुनुको फरक पाटोलाई केलाउनु जरुरी छ । पछिल्लो समय उनीहरुको टिमले निर्माण गरेको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ दशैँमा प्रदर्शनमा आउने चर्चा थियो । तर, घटस्थापनाको २ दिन अगाडि देखि फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ प्रदर्शनमा आउने पक्का भएको छ । त्यसपछी बलिउड फिल्म ‘वार’ प्रदर्शनमा आउनेछ । यी दुई फिल्मका कारण छ माया छपक्कैको रिलिज मिती पछि सरेको छ । फिल्म असोज २४ गते देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
अघिल्लो दशैँमा दिपकको फिल्मका लागी निर्देशक असोक शर्माले आफ्नो फिल्मको प्रदर्शन मिती हेरफेर गरेका थिए । यो बर्ष असोकले रोजेको रिलिज मिती पाएका छन् । यही समयमा दिपकले छक्का पञ्जा २ यूट्यूबमा रिलिज गर्न लागेका छन् । यसलाई शंकाको दृष्टीले हेर्ने हो भने उनले रातो टिका निधारमालाई अप्रतक्ष रुपमा मार हान्न खोजेको बुझिन्छ । उनले दर्शकलाई यूट्यूबमा अल्झाएर राख्न खोजेको बुझ्न कठिन हुँदैन । हुन त उनले स्टाटसमा हाइलाइट्स नेपालले दर्शकको गुनासो सुनेको भनेका छन् । तर, अर्को पाटोमा उनले दर्शकको नाम लिएर कतै फिल्मी राजनिती गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।